Apple manadihady fomba famandrihana vaovao (manual?) Ho an'ireo fitaovana findainy | Vaovao IPhone
Apple manadihady fomba vaovao (manual?) Fiampangana fitaovana ho an'ny findainy
Fitaovana finday sy azo itondra no tena mandroso amin'ny zavatra rehetra. Isaky ny manana efijery tsara kokoa isika, antennas tsara kokoa, rindrambaiko matanjaka kokoa ary ny zavatra rehetra dia mihatsara haingana dia haingana, saingy misy zavatra mijanona: batery. Betsaka ny orinasa manadihady mba hamoahana ny bateria manaraka, fa tsy midika kosa izany hoe tokony hatsahatra ny famotopotorana, ohatra, fomba fiasa vaovao ahafahantsika manitatra ny fizakantenan'ny fitaovana iray.
Araka ny patanty iray izay naseho ampahibemaso androany Alakamisy 16 Febroary, Apple dia manadihady fomba fiasa miady amin'ny fitaovana afaka mamokatra herinaratra amin'ny alàlan'ny hetsika. Fa ahenao kely ny hafanam-ponao raha mieritreritra ianao fa ho eo am-pelatanana ity hetsika ity; IZA hifindra isika dia ho kodiarana toy ny famantaranandro mahazatra io ary hampiakarinay ny famantaranandro toy ny fanaovanay amin'ny famantaranandro miolakolaka izay tsy sahiko lazaina amin'ny taona nanajanona ny fampiasantsika azy ireo.
Apple dia manaparitaka fomba vaovao iray vaovao
Na dia ny patanty aza, misy ao amin'ny Ity rohy itySomary sarotra kokoa noho ny kodiarana tsotra mamela antsika hitaky vola amin'ny Apple Watch izy io, tsy afaka mieritreritra isika fa izany fotsiny. Raha izaho manokana dia toa tsy azo inoana fa ny vahoaka Cupertino dia hanampy an'io fiasa io amin'ny famantaranandrony na ny iPhone, zavatra izay eritreretin'ilay patanty ihany koa. Azonao an-tsaina ve ny olona iray izay nandoa vola an-jatony euro ho an'ny famantaranandro faobe izay mandany ny fotoanany amin'ny familiana kodiarana toy ny hoe nisy famataran'ora tamin'ny 30 na taona lasa izay? Ankoatr'izay, koa tsy maintsy jerentsika hoe ohatrinona ny fahaleovan-tena azontsika aorian'ny faharetan'ny familiana ity kodiarana enta-mavesatra ity.
Raha ny hevitro, ny tadiavin'i Apple amin'ity patanty ity dia ny hoe tsy misy olona mampiasa hevitra efa ananan'izy ireo, ireo patanty ireo dia miasa ho an'izay ihany koa. Saingy ny tena mahaliana kokoa dia ny fametrahana rafi-pandoavam-bola, misy amin'ny famantaranandro maro, izay miampanga ny Apple Watch na iPhone amin'ny hetsikay. Na raiso ny plunge ary alefaso ny bateria manaraka. Inona ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Apple manadihady fomba vaovao (manual?) Fiampangana fitaovana ho an'ny findainy